Buuga Cusub Ee Michael Owen Oo Isku Diray Liverpool Iyo Kabtankeedii Steven Gerrard. - Gool24.Net
Buuga Cusub Ee Michael Owen Oo Isku Diray Liverpool Iyo Kabtankeedii Steven Gerrard.
September 6, 2019 Mahamoud Batalaale
Xidigii hore kooxaha Liverpool, Real Madrid, Man United iyo Newcastle United ee Michael Owen ayaa buug cusub oo uu qoray waxa uu ku sheegay qaabkii ay Liverpool u doonaysay in ay ka takhalusto Steven Gerrard.
Michael Owen ayaa sheegay in maamulka kooxda Liverpool ay doonayeen in ay Gerard ka takhalusaan laba sanadood ka hor waqtigii uu Anfield ka baxay taas oo uu muran ku abuuray.
Maalmihii ugu danbeeyay waxa uu khilaaf xoogani ka dhexeeyay Michael Owen iyo halyaygii kooxda Newcastle United ee Alan Shearer laakiin markan waxa uu Owen u muuqday mid iska hor keenay Gerard iyo kooxdii uu kabtanka u soo ahaa ee Reds.
Michael Owen ayaa buugiisa cusub waxa uu ku soo bandhigay arintii Gerard ee Liverpool ka hor intii aanu Maraykanka u wareegin wuxuuna yidhi: “Xaalada Steven, waxaan ka shakisanahay haddii uu isagu xaqiiqdii doonayay in uu 2015kii ka ciyaaro USA”.
Laakiin Michael Owen oo arin muran keentay ka sheegay qaabkii ay maamulka Liverpool ula dhaqmayeen Gerard ayaa yidhi: “Waxaan maqlay in kooxdu ay doonaysay in ay isaga saarto laba sanadood ka hor waqtigii dhabta ahaa ee uu isagu baxay”.
Michael Owen ayaa aaminsan in Steven Gerard uu ciyaaraha kaga fadhiisan lahaa Liverpool haddii aan lagu qasbin bixitaanka wuxuuna yidhi: “Waxaan hubaa in uu waayihiisa ciyaareed isagu ku dhamaysan lahaa Liverpool isaga oo ciyaaraya kulamo sii yaraanaya ilaa inta uu gaadhayo meel shaqaalaha tababarka lagu darayo,, arintani xili danbe ayay dhacday”.
“Laakiin, sababtoo ah waxa uu ahaan lahaa calaamad aad u awood badan, waxaan rumaysanahay in isaga waqtiga kooban lagu qasbay in uu baxo, Steven kooxda ayuu ka waynaa”. ayuu Michael Owen hadalkiisa sii raaciyay.
Michael Owen ayaa buugiisa waxyaabo badan ku qoray iyada oo qaar ka mid ahi ay dood iyo muran ka dhex abuureen kubbada cagta England.